महाकाली तटबन्धको ६३ प्रतिशत काम सम्पन्न - TV Annapurna
महाकाली तटबन्धको ६३ प्रतिशत काम सम्पन्न
November 10, 2017 Annapurna TV
उद्धब सिंह धामी, दार्चुला |
०७० सालको महाकाली बाढीले जिल्ला सदरमुकाम खलंगा साघुरो बनाएपछि महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाद्धारा निर्माण गर्न लागि महाकाली तटबन्धको हालसम्म करिब ६३ प्रतिशत काम सम्पन्न भैसकेको छ ।
विभिन्न प्याकेजमा निर्माण भइरहेको महाकाली तटबन्धको प्याकेज नम्बर ९ र १२ नम्बर प्याकेज आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मै सम्पन्न भएको आयोजना प्रमुख शुशीलचन्द्र देबकोटाले बताउनु भयो । वर्षात्को समयमा सुस्ताएको महाकाली तटबन्धको काम हाल प्याकेज नम्बर ८ बाहेक अन्य प्याकेजमा काम भइरहेको छ ।
१२ ओटा प्याकेजमा निर्माण भैरहेको महाकाली तटबन्धको काम चालु आर्थिक वर्षमा ३ ओटा प्याकेजमा काम गर्ने गरी थप गरिएको छ । जौलजीविको तल एउटा प्याकेज र जौलजीवि माथि अर्को प्याकेज र रिङनतालमा एउटा प्याकेज गरी ३ ओटा प्याकेज थप गरिएको आयोजना प्रमुख देवकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
प्याकेज नम्बर १ देखि ६ सम्म चालु आर्थिक वर्षको पुष मसान्त सम्म काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको उहाँले बताउनु भयो । त्यस्तै प्याकेज नम्बर ७ र ८ को केही काम बाँकी रहेकाले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म सक्ने लक्ष्य रहेको छ । त्यस्तै प्याकेज नम्बर १० मा भने केही चुनौती रहेकाले निर्माण कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको आयोजना प्रमुख देवकोटाले बताउनु भयो ।
भारतको खोतिला पहिरोको कारण प्याकेज नम्बर १० मा निर्माण गरिएको तटबन्धको स्टर्ड ९नदीको बेग छेक्ने ब्लक० समेत निर्माण गर्न नसकिएको उहाँले बताउनु भयो । स्थानियहरुले भीता काट्न नदिएपछि ८ मिटर चौडाइमा निर्माण गर्नु पर्ने उक्त पर्खालको जग ५ मीटरको मात्रै निर्माण गरिएको छ । साथै पर्खाल बचाउनको लागि नदीको बेगलाई डाइभर्सन गर्ने स्टर्ड निर्माण गर्नु पर्ने भएपनि पहिरोको कारण निर्माण गर्न नसकिएको हो । खोतिला पहिरो हटाउन भारतसंग आग्रह गरेपनि अहिले सम्म पहिरो नहटाउदा झन समस्या भएको नदी नियन्त्रण आयोजनाका प्रमुख शुशीलचन्द्र देबकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
प्रथम चौमासिकमै ७ करोड खर्च
महकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाले तटबन्ध निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमै करिब ७ करोड रुपैया खर्च गरेको छ । साथै असार महिनादेखि वर्षातको बेला ढलान गर्न नसकिने भन्दै सुपरभाइजरहरु हटाएका थियो भने तटबन्ध निर्माणको काम पनि सुस्ताएको थियो । दशैतिहार सम्पन्न भएपछि भर्खर मात्रै तटबन्ध निर्माण कार्यको गति बढाउन थालिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा धेरै काम नभएपनि ७ करोड जति खर्च भएको आयोजना प्रमुख देवकोटाले बताउनु भयो । आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ बाट नदी नियन्त्रण आयोजनाले सञ्चालन गरेको तटबन्ध निर्माण गर्दा हालसम्म झण्डै १ अर्ब ३७ करोड खर्च गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ सम्म १ अर्ब २८ करोड र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म झण्डै ७ करोड खर्च गरिएको नदी नियन्त्रण आयोजना प्रमुख शुशीचन्द्र देवकोटाले जानकारी दिनुभयो । आयोजनाले झण्डै ३ अर्ब ५ करोड लागतमा महाकाली तटबन्ध निर्माण गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।
सुर्खेतबाट दैलेख जाँदै गरेको बस दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु १८ घाईते
निकुञ्ज भएर जाँदा लाग्ने शुल्क हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन
सुनको भाउमा बृद्धि, तोलाको कति ?
मंगलबार सुनको भाउ ३ सयले बढेको छ । साताको तेस्रो दिन आज छापावाला सुन प्रति तोला...
राष्ट्रिय गौरवका तीन आयोजनाले एक सुको खर्च गर्न सकेनन्
आर्थिक समृद्धिका लागि विकास, निर्माणलाई जोड दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला तीनवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले छ महिना समय...
स्थानीय तहलाई कोषमा नगद दिने व्यवस्था खारेज हुँदै
स्थानीय तहलाई बर्षको सुरुमै सीधै पैसा दिँदा समस्या आएपछि सरकारले आगामी आर्थिक बर्षदेखि यो प्रणाली खारेजीको...
सूर्या लाईफ ईन्स्योरेन्सको १०ः४ अनुपातको हकप्रद जारी हुँदै
सूर्या लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको हकप्रद सेयर नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्विकृत गरेको छ । कम्पनीको गत पुसमा...
नेप्से ओरालो बाटोमा, लगानीकर्ता अन्योलमा
साताको दोस्रो दिन सोमबार पनि शेयर बजार परिसुचक नेप्से घटेको छ । पहिलो दिन आइतबार ९...
सूरक्षा व्यवस्था राम्रो नहुँदा सनराइज बैंकको धरान शाखामा चोरी
सुनसरीको धरानस्थित सनराइज बैंकको शाखामा चोरी भएको छ । सोमबार बिहान इलाका प्रहरी कार्यालय, उक्त बैंकमा...
तरलता ब्यवस्थापनको लागि बैंकहरु सहकारी धाउँदै
केहि समय यता फेरि पनि बैंकहरुमा लगानीयोग्य पुँजी तरलता को अभाव देखिएको छ। तरलता ब्यवस्थापन गर्नका...
दुईघण्टाको लागी साढे १५ लाख
राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र भक्तपुरले दुई घण्टाको कार्यक्रमका लागि १५ लाख ५८ हजार रुपियाँको बजेट छुट्याएको छ...
५० अर्ब घाटामा जाँदै सरकार
सरकारको खर्च खातामा बजेटरी प्रणालीभित्रको रकम सकिएको छ। बजेट स्रोतबाट जुट्नुपर्ने रकम सकिएर उल्टो नौ अर्ब...
रोकिएन कुकुर आतंक, व्यवस्थापनमै दुई बर्षमा दुई करोड खर्च
काठमाडौं महानगरिपालिकाभित्र भुस्याहा कुकुर व्यवस्थापनका नाममा दुई बर्षमै करिव दुई करोड रकम खर्चभए पनि भुस्याहा कुकुर...
सामान्यको काज फिर्तामा करोडौंको चलखेल
सरकारले निजामती कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा जान कडाइ गरेसँगै गत असोज–कात्तिकमा हाकिमलाई ‘अतिरिक्त रकम’ दिएर...
March 18, 2018 Annapurna TV 0
बढ्न थाल्यो रेमिटेन्स, तरलतामा केहि राहत हुने
अघिल्लो महिना सम्म लगातार रुपमा घटेको रेमिटेन्स माघ महिनामा भने सामान्य बढेको छ । यस अघिका...
नेप्से फेरी ओरालोतिर
साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजार परिसुचक नेप्से घटेको छ । गतसाताको अन्तिम तीन दिन लगातार...
फस्टाउदै चेक बाउन्सको धन्दा
पछिल्ला बर्षहरुमा आर्थिक अपराधजन्य घटनामा उल्लेख्य बृद्धि भएको देखिएको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका अनुसार...
नेपालको आर्थिक संकट चुलिंदै, आर्थिक वर्षको सात महिनामै बाहिरियो ६ खर्ब १० अर्ब
नेपाल दिनानुदिन आयातमुखी मुलुक बन्दै गइरहेको छ । मुलुकमा आयात हुने संख्याको हिसाबले निर्यात हुने दैनिक उपभोग्य...
March 17, 2018 Annapurna TV 0
बुझेर मात्र शेयरमा लगानी गर्न अर्थमन्त्रीको सुझाव
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी बिना नै शेयरमा लगानी गर्दा जोखिम बढ्न सक्ने बताएका छन् ।...
तत्कालीन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक डुबाउनेका अध्यक्ष सहित १३ पक्राउ
कर्जा प्रवाहमा अनियमितता गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले तत्कालीन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक...
March 16, 2018 Annapurna TV 0
एनआईसी एशिया बैंकको कामु प्रमुख कार्यकारीमा न्यौपाने नियुक्त
एनआईसी एशिया बैंक सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण रिसालको राजीनामा स्विकृत गदै कामु सिईओको रुपमा...
बृद्धबृद्धाले थप एक हजार भत्ता पाउने
मेन्छ्यायेम गाउँपालिकाले स्वास्थ्य संस्थामै गएर प्रसूति गराउने आमालाई प्रोत्साहन तथा यातायात खर्च थप गरेको छ । सरकारले...
March 16, 2018 TV-Annapurna 0
सेयर बजारमा सुधारको संकेत: नेप्से तथा कारोबार रकम दुवैमा बृद्धि
साताको अन्तिम दिन विहीबार सेयर बजारमा नेप्से तथा कारोबार रकम दुबैमा सामान्य सुधार आएको छ...
आफ्नै श्रीमानले साथीलाई बलत्कार गर्न लगाएको आरोप
प्रदेश र प्रतिनिधी सभा निर्वाचनमा आयोग पारदर्शी नभएको ईयूको आरोप
कांग्रेसमा देउवालाई एक्ल्याउन मोर्चाबन्दीको प्रयासमा यी तिन नेता
दरबारमार्ग बलात्कार प्रकरणः मुख्य अभियुक्त कार्की पक्राउ